जवानी हेर्दा गाह्रो भए टीभी बन्द गर्नुहोसः ज्योती मगर::Nepal's Digital Magazine
सधै नै चर्चा र विवादमा रहन्छिन, गायिका ज्योती मगर । गायनको अतिरिक्त मोडलिङमा समेत सक्रिय ज्योतीलाई अश्लिलता फैलाएको आरोप पटक–पटक लाग्ने गरेको छ । तर उनी यस्तो आरोप पटक्कै स्विकार्दिनन । बरु आफूलाई ‘बोल्ड वुमन’ भन्न रुचाउँछिन । प्राय म्युजिक भिडियो मा छोटा र पारदर्शी पोशाकमा प्रस्तुत हुने ज्योतिलाई लगाइएका पाँच आरोप ः
यो बेकारको आरोप हो । मलाई नबुझ्नेहरुले पहिला पनि यसो भन्थे अहिले पनि भन्छन । छोटो लुगा लगाउँदैमा जवानी देखिने र लामो लुगा लगाउँदैमा जवानी छोपिने हैन । तपाईले देख्नु भएको होला नि सारीमा पनि महिलाको जवानी छताछुल्ल भएको ।
म आफैंले गाएका पछिल्ला कतिपय गीत मलाई नै चित्त बुझेको छैन । यो साँचो हो । तर, फेरि म आफैं गीतकार हैन । मलाइ जस्तो गीत दिन्छन त्यस्तै गाउने हो । अर्को कुरा, खै किन हो कुन्नी मैले गाउने भनेपछि गीतकारले पनि रोमान्टिक गीत नै लेख्छन ।
४. कला क्षेत्रमा विकृति फैलाउदै हुनु हुन्छ । तपाईंको सिको गरेर अरुले पनि छोटो लाउन थालेका छन ? तपाइले गर्दा लोकगीतमा विकृती नै आयो नी ?
आम्मामा । यो कुरा त कसरी पत्याउनु । ज्योती मगर यो उद्योगमा आउनु भन्दा पहिला नै, छोटा लुगा लगाउने केटीहरु धेरै थिए काठमाडौंमा । अहिले न्युरोड लगायत स्थानका सपिङ मलमा जानुस त म भन्दा छोटो लुगा लगाएर हिंड्नेहरु कति छन कति । यो चाँहि पक्का हो, छोटो लगाउने मन भएका तर, हिम्मत नभएकाहरुलाई मैले बाटो बनाइदिएको छु ।
५ ज्योतीको गीत आउँदा टीभी नै बन्द गर्नुपर्ने स्थिती छ, के तपाई परिवारसँग बसेर हेर्न मिल्ने गीत बनाउन सक्नुहुन्न ?
यो त झन म मान्दै मान्दिन । आजसम्म टीभी नै बन्द गर्नुपर्ने गीत न मैले गाएकी छु न त मोडलिङ नै गरेको छु । तपाईहरुलाई साह्रै गार्रुहो भयो भने नहेर्नुस । हेर्नैपर्छ भन्ने छैन । तर, मैले तिम्रो गीत आउँदा टीभी बन्द गरे भन्ने मान्छे आजसम्म भेटेको छैन ।
गायक जिसीको कर्णाली पारी सार्वजनिक
पंगेनीले केहीलाई रुवाए,केहीलाई हँसाए
लोक संगितमा जम्दै शैलेन्द्र र आशा